Nin aaskiisa lagu guda jiray oo la ogaaday inuu nool yahay!!! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Nin aaskiisa lagu guda jiray oo la ogaaday inuu nool yahay!!!
James Nyaga waa Aabaha dhalay wiilka inuu dhintay la mooday /Photo Credit: STANDARD MEDIA
Embu (Halqaran.com) – Nin lagu magacaabo Stephen Kibuti’s, kuna nool deegaanka Embu ee dalka Kenya, waalidkiisa iyo eheladiisana ay ka shaqeynayeen aaskiisa iyo tacsidiisa ayaa la ogaaday in uu nool yahay.
Waalidka dhalay Kibuti ayaa u sheegay warbaahinta The Standard ee dalka Kenya in wiilkooda uu xanuusaday maalma kahor, kadib markii uu naqaska ku dhagay, kadibna aabaha dhalay bukaanka oo lagu magacaabo James Nyaga iyo hooyadii ayaa ula cararay xarun caafimmaad oo ku taalla deegaanka Kiritiri, halkaasi oo dhakhaatiirtu ay kula tacaaleen xaaladiisa caafimaad.
Waxaa markii dambe loo gudbiyay isbitaal kale oo wax looga qaban karo xaaladiisa caafimmaad, waxaana la geeyay isbitaalka guud ee Embu, halkaas oo la seexiyay qeybta bukaan jiifka ee isbitaalka.
Waalidka dhalay bukaanka ayaa habeenkii isaga soo hoyday gurigooda, balse war naxdin ah la kulmay subixii markii ay soo laabteen.
Aabaha wiilka bukay oo lagu magacaabo Nyaga, ayaa markii uu gaaray sariirtii uu jiifay wiilkiisa, waxaa uu u tegay iyadoo wiilkiisii uusan jiifin
“Waxaan ka raadiyay dhamaan qolalka isbitaalka, balse ima suurtagelin in aan helo, qof kamid bukaannadii ag-jiifay wiilkeyga ayaa ii sheegay in wiilkjeyga lagu qaaday sariir, waxaana aaminay in uu dhintay oo loo sii qaaday qolka lagu keydiyo meydka, waan naxay oo istaagga ayaa ka dhacay”, ayuu yiri Nyaga oo ah aabaha dhalay bukaanka.
Nyaga markii sida uu sheegay isbitaalka uu ka waayay wiilkiisa, waxaa uu aaminay in wiilkiisa uu dhintay.
“Markii aan soo naaxay waxaan racaay bas, si aan ugu laabto tuuladii aan ka imid oo aan dadkii ugu wargeliyo dhimashada wiilkeyga, waxaana qoyska, ehelka iyo dadka deriska ahba u sheegay in wiilkeyga uu dhintay, way ka naxeen dhimashada, waxayna sameyeen guddi ka shaqeeya aaska, halkaas oo ay hawl badan ka bilaabatay”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Nyaga.
Qoyska ayaa markii ay diyaar garoobeen waxaa ay uruuriyeen lacag dhan shan boqol oo doolar, lacagtaasi oo loogu talo galay aaska.
Qaar kamid ah ehelada oo uu ku jiro aabihii dhalay wiilka ayaa dib ugu soo laabtay isbitaalka, si ay u bixiyaan kharashka isbitaalka. Waxay tageen qeybta kharash bixinta ee isbitaalka, waxayna u shegeen in wiilkooda uu dhintay, ayna rabaan in ay oggaadaan inta lacag ee lagu leeyahay.
Gabadhii joogtay xafiiska lacag qaadista ee isbitaalka ayaa qeybta lagu keydiyo xogta dadka ku dhinta isbitaalka ka raadisay galka ama faylka uu ku qornaa magaca wiilkooda, balse nasiib darro waa ay weyday.
“Qofkii joogay xafiiska lacagta waxaa uu latashi ugu tegay dhaqaatiirtii kale ee isbitaalka joogtay, balse markii uu inagu soo laabtay waxaa uu inoo sheegay in bukaanka uu nool yahay oo uusan dhimanin, waxaana la inoo sheegay qolka uu ku jiro”, ayuu yiri Nyaga.
Markii James Nyaga oo ah aabaha dhalay wiilka iyo qoyska ay tageen qolka uu ku jiro wiilkooda, waxay arkeen wiilkooda oo ay dul taagan yihiin dhaqaatiir, xaaladiisana lala tacaalayo.
Aaabaha dhalay wiilka ayaa sheegay in u aad u farxay oo uu ilmeeyay, kadib markii uu arkay xaaladda wiilkiisa oo kasoo reyneysa.
Agaasimaha isbitaalka Embu Dr Daniel Mugendi oo la hadlay warbaahinta maxaliga ee Kenya ayaa sheegay in odayga dhalay wiilka aanu wax caddeyn ah oo ku aadan dhimashada wiilkisa aanu ka helin maamulka sibitaalka, sidaas darteedna uu iska mala awaalay dhimashada.
“Bukaanka wuxuu jiifay isla sariirta uu aabihii ku ogaa, balse busto ayuu korka is saaray oo waa uu arki waayay, qaladka kale ee uu sameeyay odaygna waxay ahayd in uusan maamulka isbitaalka iyo kalkaaliyeyaasha isbitaalka aanu weydiinin halka uu ku sugan yahay wiilkiisa,” ayuu yiri Dr Mugendi.
Wuxuu intaa raaciyay in bukaanka laga daweeyay saameyn ay ku reebtay khamri uu cabay, xaaladiisuna haatan ay wanaagsan tahay.
Guddigii loo xil saaray qabanqaabada aaskiisa Stephen Kibuti oo ah bukaanka loo maleeyay in uu dhintay ayaa sheegay in lacag dhan boqol doolar ay isticmaaleen oo ay kusoo iibiyeen waxyaaba looga baahna aaska.
Embu ee dalka Kenya
Nin aaskiisa lagu guda jiray oo la ogaaday inuu nool yahay